Muudiiwwan Abiyyii kaabinootaafi Deeggartoota isaa ittiin mataa Hidhee,Gowwoomsuufi gabroomsu keechaa muraasa Isinitti Himuu? – Kichuu
HomeNewsAfricaMuudiiwwan Abiyyii kaabinootaafi Deeggartoota isaa ittiin mataa Hidhee,Gowwoomsuufi gabroomsu keechaa muraasa Isinitti Himuu?
Muudii Abiyyi Deeggartootaafi Kaadiroota isaa Yeroo mara ittiin gowwoomsaa as gahe keessaa ijoon Gaalee “Tapha siyaasaa” jettu tanadha. Abiyyi ganamaa galgala Gaalee kanaan Kaabinootaafi deeggartoota isaa mataa hidhee muudii itti qabata.bifa kanaan Gowwoomsa. waan wayii gochuu yoo barbaadu yeroo mara Jalqaba karoora isaa baafata.Erga baafateen boodammoo kaadiroota Gurguddoo wal gahii ariifachiisaa jedhee walitti yaamata.itti fuufees waan gochuuf deemu sana Dubbii qoolaatiin Gurra Buusa.erga gurra Buuseen booda afaan isaa Damma sanaan namni tokko akka isa hin mormine,”Taphichi Tapha siyaasaati Tapha kana keessatti dantaa oromoottu kabajama” Jedhee qabsiisa.sanaan harka Dhoofsisee,Akka isaanis,Warra gad-Jallaa Haaluma kanaan Dubbicha itti Quussanii Gaafa Abiyyi Waan jechaa ture sana raawwatu tasumaa,hin mormineefi,hin shakkine taasisan amansiisee hojjitti bobbaasa.
Ajandaawwan ykn dogoggoroota ijoo Abiyyi Haala kanaan Kaadiree isaa ittiin gowwoomsee mataa hidhaa ture keessaammoo muraasni isaan armaan gadiiti.
☞ Abiyyiif lammaan Gaaf waldhabanii Lammaa Ari’uuf karoorasaa xumuru Haala kanaan Jara gowwoomse,Kun tapha siyaasaati,anaaf lammaan yoomuu tokko jedheeni jarris shakkii malee fudhatani warra isaanii gadii amansiisani.Boodarra dubbiin ifa baate,Kaadireen Xoobbeen immoo Achumatti Bishaan taate.
☞ Gaafa paartii kana Merg Godhee qeenxessuufi maqaaas moggaasu haaluma kanaan jara mataa nyaate.adeemsaan immoo dubbiin tunis ni mormamte.Isumaayyuu lammaan gadi bahee hundeeffama paartichaa morme,yoos kaabinetti immoo dubbiin Inqooqilleshii taate.gaafa kanas usaa tapha siyaasaati malee lammaan nu hin mormu,hin mormines jedhee Jarattii Bishaan obaase.
☞ Garaagarummichi babaldhatee gaafa Lammaa,xayyibaafi milkeessaafa paarticha keessaa ari’us akka kaadireen isaa xissi xinbissi hin jenne,tapha siyaasaa taphachaa jirra jedhee afaan qadaade.
☞ Guyyaa Jawaariin irratti yaalii ajjeechaa gaggeesses,Erga yaalichi kashafeen booda Jara walitti yaamee,Ani hin gooneeyyu kana kan godhe woyyaaneedha sassaabnee seeratti dhihessina jedhee waakkatee kaabinoota isaa mataa hidhee amansiise.sanaan booda dubbii sanas sanumaan bira kute.
☞ Gaafa TPLF irratti woraana banus Jarri angoo nurkaa fudhachuuf qophii xumurtee jirti,kanaafuu woraana itti labsuun dirqama jedhee Jara Nagayaan qe’ee ofii taa’aa jirturratti xoorinnatii labse.Erga labseen boodammoo kun wal woraansa walootitti nu geessa jettee akka isaan isa hin mormine,woyyaaneen kunoo eda shuftee,masara keenya jala bulteerti jedhee amansiise.tapha kana taphatees angoo keenyaan tikfanna jedhee kaabinee naannoo oromiyaa.ummata oromoo irraa sangoota saamsise.
Gaafa Galma Aadaa akka ijaaraniif warra Amaaraatiif Hayyamus,bifuma walfakkaataa ta’een kun tapha siyaasaati,tokkoon keessan akka hin mormine jedhee amansiisee,biyyetti isaan dabale.
☞ Miilanas Gaafa Tigreen mooyamuufi biyyetti dabalamuu isaa hubatuufi qalbifatu,akkuma TPLF’n Muuxattee kaatee wottaaddara isaa lafaa duguugdee maqalee deebitee seenuuf mirteessiteen mooyamuusaa dhoksee,jara injifannee jirra,woraana keenya beekaa achii baasnee malee mooyamneetii miti,nuti waan argachuu qabnu,argannee jirra,kanaan dura filannicha akka nu jalaa hin gufachiisneef ture amma isas injifannoon xumurree jirra,kanaafuu tapha siyaasaa taphachuu qabna jedhee amansiisee fudhachiise.
Itti fuufuu moo dhiisuu?